नेपालका दुई छुटटा छुटै स्थानमा बम बिस्फोट नुवाकोटमा भएको बम बिस्फोटको जिम्मा–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | Birat Khabar
नेपालका दुई छुटटा छुटै स्थानमा बम बिस्फोट नुवाकोटमा भएको बम बिस्फोटको जिम्मा–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
नुवाकोट । नुवाकोट जिल्लामा काग्रेसका नेतालाई लक्षित गरी बम बिस्फोट हुदां कुनै मानबीय क्षति भएको छैन् ।
नुवाकोटको प्रतिनिधिसभा सदस्य क्षेत्र नं. १ का कााग्रेसका उम्मेदवार डा.रामशरण महत र प्रदेश नंं. २ का उम्मेदवार रमेशकुमार महतलाई लक्षित गर्दै बम विस्फोट भएको छ । विष्फोटबाट पााच जना कााग्रेस कार्यकर्ता घाइते भएका छन् भने उम्मेदवार महतद्धय भने शकुसल छन् ।
चुनावी प्रचार अभियानको क्रममा मतदाताको घरदैलो कार्यक्रम भइरहेको समयमा ककनी गााउपालिका वडा नं. ५ काउलेथानामा आज बिहान १० बजे प्रेसरकुकुर बम विस्फोट गराएको प्रदेससभाका उम्मेदवार रमेशकुमार महतले जानकारी दिनुभयो । बम विस्फोटबाट कााग्रेसका कार्यकर्ताहरु उपेन्ऽ मिश्र, भेषकुमार तामाङ, सबिन लामा, रमेश राई लगायत घाइते भएका छन् । शरिरको विभिन्न स्थानमा चोट लागेकाले घाइते भएका मध्ये केहीको अबस्था गम्भीर छ । उनीहरुलाई उपचारको लागी काठमाडौ तर्फ लगिएको छ ।
उम्मेदवार महतद्धय चढेको बा.१४ च ७०४१ नंं को गाडीलाई लक्षित गरी प्रेसरकुकुर बम विस्फोट गराएको भएपनि उक्त गाडी अघि बढिसकेकाले कार्यकर्ता चढेको बा. १६ च ६६५ नं गाडीमा विस्फोट भएको हो । विस्फोटबाट गाडी पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी नायव उपरीक्षक मधुकरजंग विष्टले जानकारी दिनुभयो । बम विस्फोटको जिम्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लिएको छ ।
यसै गरी सिचाइ राज्री मन्त्री तथा प्रतिनिधी सभा का उमेदवार अमर सिह पुन चढेको गाडिलाइ लक्ष्छित गरि रोल्पा को सुबर्नावती गाउपालिका १ घोडागाउ को भागृवाङ मा सुतली बम प्राहर भयको छ । चुनाव प्राचार को सिलसिलामा रुनटि गढि गाउपालिका बाट लिबाङ जादै गर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले बम प्राहार गरेका छन् । बम प्राहर बाट मन्त्री लगाय चुनाव प्रचार टोलि लाइ भने कुनै क्षति नभएको प्रहरीले बताएको छ । बम हानी भाक्दै गरेका नेकपाका कार्यकर्ता माथी प्रहरी ले ७ राउनड गोलि समेत हानेको थियो ।